HOTOLORANA LOHA-MASININA VAOVAO NY FCE : Efa tonga any Espagne ireo teknisiana iraka manokana
Hivaha tsy ho ela araka ny efa nampanantenain’ny Filoha Andry Rajoelina ny olan’ny fitaterana an-dalam-by FCE (Fianarantsoa-Côte Est). 12 septembre 2019
Araka ny tatitra nambaran’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny fitaterana sy ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetr’andro dia efa tonga any Balmaseda, Bilbao, Espagne ireo teknisiana iraky ny minisitera hijery ireo loha-masinina vaovao ho an’ny FCE. Fantatra fa ho tonga ao Fianarantsoa alohan’ny faran’ity taona 2019 ity ireo loha-masinina vaovao ireo. Nisedra olana matetika ny fifamoivoizana an-dalam-by FCE noho ny loha-masinina efa antitra dia antitra nampiasainy.
Noho izany indrindra no nandefasana ireto teknisiana manokana ireto. Araka ny fanazavana, nananosarotra ny fitadiavana loha-masinina ho an’ny FCE teo aloha satria ny loha-masinina eran-tany vokarina amin’izao vanim-potoana izao dia efa saika ireo loha-masinina be velarana avokoa. Io antony io rahateo no tsy nety nahavoavaha ity olana ity. Ny an’ireo firenen-dehibe matanjaka, mpamokatra loha-masinina tahaka an’i Espagne mantsy dia saika efa nohalehibeazina avokoa ny lalam-by. Ny eto amintsika nefa tsy mbola nasiam-panamboarana fa ireo nolovaina tamin’ny mpanjanaka ihany no mbola iasana hatramin’izao. Ireto teknisiana nalefa ireto araka izany dia hijery manokana ireo loha-masinina azo ampifanarahana amin’ny lalam-by misy eto Madagasikara ary hampanamboatra vaovao mifanaraka amin’ny refin’ny lalam-by eto an-toerana raha toa ka tsy misy io maridrefy takiana io.
Ain-dehiben’ny Faritra Vatovavy Fitovinany
Tsara ny manamarika fa ain-dehiben’ny Faritra Vatovavy Fitovinany ny fisian’ny zotra an-dalam-by FCE. Ankoatra ny fitaterana ny mponina dia izy io koa no miantoka ny famoahana ireo vokatra any an-toerana. Manana anjara toerana lehibe eo amin’ny sehatry ny fizahan-tany ny FCE satria ny fisian’io lamasinina io no isan’ny antony iray mampiroborobo ny fizahan-tany any amin’iny Faritra iny. Liana amin’ny tantarany, ny hatsaran’ireo toerana kanto sy voajanahary lalovany ireo mpizaha tany ary amin’ny alalan’ireny koa matetika no hamantaran’izy ireo ny tantaran’ny fanjanahan-tany. Mirefy 170 km ny Fce ary mampitohy an’i Manakara sy Fianarantsoa. Teo aloha dia inefatra isan-kerinandro no fotoam-piasany saingy nihena izany tato aoriana noho ny olana ara-teknika mateti-pitranga.
Nihoa-pefy ny mpitari-posy, nirefotra ny lakrimôzena polisy iray naratra voatora-bato FANDAVANA FIHIBOHANA (178) 27 mars 2020 Lehilahy 23 taona hita faty tao an-tranony ny sabotsy antoandro lasa teo ARANTA (122) 31 mars 2020 Nankatoavin’ny Fanjakana malagasy sy ny Oms FIKAROHANA HIADIANA AMIN’NY CORONAVIRUS NATAON’NY IMRA (114) 27 mars 2020 Tranga 6 nanokafana fanadihadihana, olona iray naiditra am-ponja FANAPARITAHANA VAOVAO TSY MARINA (110) 27 mars 2020 Fiara iray nifaoka mpandeha an-tongotra, miisa 02 ireo maty tsy tra-drano TSARASAOTRA (87) 27 mars 2020 Lavon’ny balan’ny Polisy ny jiolahy iray, karohina ny namany FIKASANA FANAFIHANA “VILLA” (80) 31 mars 2020